Ederede nke Larry Harris na Martech Zone |
Edemede site na Ọ bụ Larry Harris
Iwu iwu nke sara mbara nke akpọrọ General Data Protection Regulation, ma ọ bụ GDPR, malitere na May 25th. Oge imechi nwere ọtụtụ ndị na-egwu mgbasa ozi dijitalụ na-egwu egwu na ọtụtụ ndị ọzọ na-echegbu onwe ha. GDPR ga-akwụ ụgwọ ma ọ ga-eweta mgbanwe, mana ọ bụ mgbanwe ndị na-ere ahịa dijitalụ kwesịrị ịnabata, ọ bụghị ụjọ. Nke a bụ ihe kpatara ya: Ọgwụgwụ nke Pixel / Cookie-based Model Is Good For The Industry Nke bụ eziokwu bụ na nke a adịteghị aka. Ndị ụlọ ọrụ nọ na-adọkpụ ụkwụ ha,